Ike nwere ike: ihe ọ bụ, ụdị, njirimara na mgbanwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Gịnị bụ ike
Na physics na ọkụ eletrik anyị na-ekwu maka ya nwere ike. Ọ bụ otu n'ime ụdị isi ike abụọ na ọ bụ ọrụ maka ịchekwa ihe na nke ahụ dabere na ọnọdụ ya n'ihe metụtara ihe ndị ọzọ. Ọ dabere na ịdị adị nke ike dị n'ime ya na ihe ndị ọzọ. Enwere ike ike zuru ebe niile ma na ngalaba physics na ọkụ eletrik.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere ya.
1 Main ụdị ike
2 Ihe atụ nke ike
3 Dị ike nke ike
4 Eletrik na ekwedo
Main ụdị ike
Agbanyeghị na ihe niile a dị ka ihe siri ike nghọta, ka anyị lee ụdị ike dị adị.
Ike kinji: bụ ihe metụtara ya na ngagharị. Dịka ọmụmaatụ, pupụtara nke igwe akuku nwere ikuku ume mgbe ikuku na-efe. O nwere ike ime ka ọ bụrụ eletrik ma ọ bụrụ na a ga-eji ha.
Ike nwere ike: A na-echekwa ya iji merie ọnọdụ ya n'ihe metụtara ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, bọọlụ nke kwụ ọtọ nwere ike dị elu karịa ike ala.
Anyị ga-ahụ otu ihe nwere ike isi nwee ume n'ụzọ abụọ a. Iji mee nke a, ka anyị were otu egbe ala. Mgbe cannonball na-agbabeghị ọkụ, ume niile o nwere dị n'ụdị ike. Ọnụ ọgụgụ nke ike a dabere n'ihe ụfọdụ dị ka ọnọdụ gbasara ihe ndị ọzọ. Mgbe a na-agbapụ ya, ike a niile na-aghọ ihe nkwanye ugwu ebe egbe na-apụ na nnukwu ọsọ. Ihe oru ngo a na-echekwa ike di egwu ma o karie ike. Ka ha ji nwayọ nwayọ, ha nwere obere ume ume na mgbe ha kwụsịrị nkwụsị zuru oke, ha na-alaghachi na ike ha nwere.
Ihe atụ nke ike
Iji ghọta nke a nke ọma, anyị ga-enye ụfọdụ n'ime ihe atụ. Ka anyị chee echiche banyere bọọlụ ndị a na-eji akwatu ụlọ. Mgbe bọọlụ kwụsịrị kpamkpam ma ejighị ya, ọ nwere ike ịchekwa. Ike a sitere na ebe o di n'ihe banyere ihe ndi ozo. Mgbe bọọlụ bidoro ịmalite, ọ na - agagharị dị ka pendulum ga - akụ akụkụ nke ụlọ ahụ ka ọ kwatu. Ọ bụ n'ime mmegharị ka bọl malitere inwe ume ọrụ. Mgbe ọ na-akwagharị ma kụọ mgbidi ahụ ọzọ nwere ike nwere ike na obere ume ọrụ.
Ka anyị na-aga na-ebuli bọọlụ n'ịdị elu anyị na-echekwa ike nwere ike karịa. Nke a bụ n'ihi na ike ndọda Earthwa na-adọta bọọlụ jiri ike dị ukwuu karịa elu ya. Yabụ, ọ bụrụ na a kwụsịtụrụ egbe ala ahụ n'ogo dị elu dị okpukpu atọ, ọ ga-enwe ike karịa otu nke dị elu sentimita atọ. Ihe a niile dị mfe ịhụ nyere mmetụta ha nwere mgbe a dara n'otu oge. Nke a bụ ihe kpatara eji ekwu na oke ike ihe nwere dabere na ọnọdụ ya ma ọ bụ ike ike ndọda na-enwe.
Dị ike nke ike
Anyị maara na ihe nwere ike ịchekwa ụdị ike a ma nwee ike gbanwee ya na ụdị ndị ọzọ dabere na ihe ga-eme na-esote. Ka anyị lee ihe dị iche iche dị adị:
Ike ndọda nwere ike: Ọ bụ nke nwere ihe ruru ka ụwa na-adọrọ mmasị gị. Ka elu gị, ihe ị nwere. Ọ bụghị naanị ya, ebe ike ndọda nwere ike ịmekọrịta ihe ọzọ ka ukwuu.
Chemical nwere ike: Ọ bụ nke nwere ihe ahụ echekwara dịka etu esi hazie atọm atọ na ụmụ irighiri ihe. Anyị maara na atọm na ụmụ irighiri ihe nwere ike ịtụ dị iche iche dabere na steeti ihe ahụ n’onwe ya. Ọ dabere na ntinye ya. Molekul nwere ụfọdụ agbụ kemịkal nwere ike ọ gaghị ebute mmeghachi omume. Dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị riri nri, anyị na-agbanwe nri ka ọ bụrụ ike kemịkal na ụfọdụ nri ga-ewepụta calorie karịa ndị ọzọ. Otu ihe a na - eme na mmanụ ọkụ dịka mmanụ, nke nwere ike ịchekwa nnukwu ike ịnweta iji mechaa gbanwee ha ka ọ bụrụ ọkụ eletrik na ọkụ.
Ike nwere ike: Ọ bụ otu nke nwere ihe dabere na ụgwọ eletriki. O nwere ike ịbụ electrostatic ma ọ bụ magnetik. Ugbo ala nwere ike ichekwa ihe ndi nwere ike ime na ike ma obu obere ihe mgbe emetu ya aka.
Ike nuklia: Ọ bụ ihe dị na mkpụrụ akụkụ atọmịk. Ike nuklia jikọtara ha na mgbe anyị mebiri ịlụ ndị a, anyị na-ebute ọgba aghara nuklia ma mepụta nnukwu ume. Anyị na-ewepụta ike a site na igwe redio dịka uranium na plutonium.
Eletrik na ekwedo
Enwekwara ụdị ike ike nwere ihe metụtara ọkụ eletrik nke ihe. Elasticity bụ ọchịchọ iji weghachite ọdịdị mbụ nke ahụ mgbe edochara ya na nrụrụ nrụrụ. Ike ndị a aghaghi ibu karịa mmegide gị. Otu ihe atụ nke ike nke mgbanwe bụ nke mmiri mgbe ọ na-agbatị. Mgbe ịlaghachi n'ọnọdụ mbụ ya, etinyeghị ike a n'ọrụ ọzọ.
Ihe omuma atu doro anya nke ike nwere ike bu uta na aro. Ike na-agbanwe na-erute uru kachasị dị ka arc na-eche n'echiche oge ọ na-adọta eriri na-agbanwe. Esemokwu a na-eme ka nkụ ahụ gbagọọtụ ntakịrị, mana ọ nweghị ọsọ ọ bụla, yabụ enweghị ike ịgba ume. Mgbe anyị hapụrụ eriri ahụ na akụ ga-amalite ịgba, ike na-agbanwe na-agbanwe ka ọ bụrụ ume arụ ọrụ.
Dị ka anyị si mara, na ọkụ eletrik anyị na-etinyekwa echiche a. Ọ nwere ike gbanwee gaa n'ụdị ike ndị ọzọ dị ka kinetic, light, thermal, wdg. E nyere ikike niile ndị a n'ihi ntụgharị nke electromagnetism.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ike nwere ike, njirimara ya na arụmọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Gịnị bụ ike
Etu ị ga-esi abụ onye na-enyocha ihu igwe
Mbara ala gas